Anshaxa Ma U Laabannaa??? .Qalinkii:Dr.Jamaal Abdirahman Bullaale | Wajaale.com
16 August 2016 | Articles
Anshaxa Ma U Laabannaa??? .Qalinkii:Dr.Jamaal Abdirahman Bullaale
Noloshu waxa ay leedahay milge iyo karaamo abadi ah oo salka ku haysa diinta iyo dhaqanka suubban ee aadamaha. Waxa alle uu bilawgii abuurtaba keenay arrimo taageeraya baadiyaynta uu shaydaanku wado, sida dumarka, maalka iyo mansabka iwm.
Dadku marka uu lumiyo aqoonta iyo garashada isku sidkan ee nolosha haga waxa uu isu rogaa dhurwaa ceeb aan ka dhawrsan. Waxa uu noqdaa ina hunguri haybad iyo anshax aan midna xeerinayn.
Hayn-yaraanta iyo han-gaabnida ummada afka Soomaaliga ku hadasha waxa ay badday masiibooyin ay u maaro waayeen. Waxa ka dhashay siyaasiyiin dillaaliin ah, ganacsato dhiig miirato ah, wadaaddo danaystayaal ah iyo suxufiyiin laba aflayaal ah.
Mabda, kasta oo qof Soomaali ah yeelan lahaa waxa fadhiisiyay hunguri, danaysi, qabyaalad iyo qof jeclaysi. Saxaafadda adduunku ma aha mid wada madax bannaan, se waxa ay ku kala duwantahay mabaadi,da guud ee la kala aaminsanayahay, waxase jira mabaadi, xeerar iyo anshax guud oo ay wadaagaan dhammaantood. Saxaafaddu waa in ay sheegtaa war hubanti ah oo dhexdhexaad ah. Warkaas waa in uu noqdaa mid labada dhinacba ee ay khusaysoba laga hubiyay. Ma jiro war saxaafad ka baxa oo dunida kale lagu saleeyo qof jeclaysi iyo dano maaliyadeed. Suxufiyiinta adduunweynaha kale waa kuwo aqoon iyo khibrad u leh waxa ay tebinayaan halka innaga qofkasta oo kamarad helaa uu noqonayo suxufi.
“Way inoo tahay’’ waa eray ay aad u adeegsadaan suxufiyiintu marka ay ku hungoobaan danaha ay ka leeyihiin siyaasiyiinta. Waxa uu bilaabayaa in uu diyaariyo warar isugu jira run madow iyo been la qurxiyay. Ma jiro wax sharci ah oo uu ka cabsi qaba, mana jiro wax qabiilkiisa ka weyn oo uu hadhow ku eeranayaa. Haddii lagu qabsado in uu caddeeyo waxa uu qoray halka uu ka keenay oo la xidho, markaas ayaa suxufiyiinta dalkuba qaylinayaan haddii xataa uu qaldanyahay.
Wallee Qaaf ujeeddo leh,
Qiimahayga kuma rido.
Magac waa qasaanade,
Wallee qado ma dhaafsado.
……. Macallin Gaarriye.
Dr.Jamaal Abdirahman Bullaale